Saxeeyaha Fudud ee Casriga ah, Dhabarka Dhabarka, Naafada curyaanka fudud - Hongzhu
Qalabka Xargaha Wadnaha Ilmaha
Saxeexa casriga ah ee casriga ah
Cushion Kuraasta Hawo Fudud
Furaashka Hawada Caafimaadka
Qalabka Neerfaha Wadnaha ee Makaanka B01-1 Super Soft
Walker Hemanplegic Walker
Maskaxda Qoorta Makaanka afkiisa DevicB01
Sax Jaceylka J09
Kursiga curyaamiinta L-L0212B
Walker Hemanplegic Caruurta
Daawada Hawada Caafimaadka A02
Maskaxda 'Neck Traction Devic'
Socodka hemiplegic ee loogu talagalay Dadka Waaweyn3
Waxaan nahay soo-saare xirfad-yaqaanno ah alaabooyinka daryeelka shakhsi ahaaneed ee qodaya qadkaan ku dhawaad ​​10 sano, alaabooyinkeenna ay ka mid yihiin aaladda qalliinka xubinta taranka ilmo-galeenka, saxeexyada qaab-dhismeedka, garka dhabarka, suumanka dhexda tababbarka, kuraasta curyaamiinta, lugeeyayaasha lugta, biraha wareega, iwm.
Waxaan leenahay 8 qof oo u shaqeeya ganacsiga caalamiga ah, hogaamiyaha ku dacweeyay ganacsiga waxay leeyihiin khibrad ganacsi oo caalami ah in kabadan 18 sano, 5 qofood ayaa weyn English, 1 qof Spanish, 1 qof Jarmal. Kulligeen waxaan leenahay bartilmaameed isku mid ah, bixinta alaabada ugu sarreysa, qiimaha tartan, iyo adeegga xirfadleyda.
Waxaan si diiran u soo dhawaynaynaa booqashadaada waxaana rajeyneynaa inaan si dhow ula shaqeyn doono.
AKHRISO DHAQANKA >>
LA XIRIIR INFO
Hal xaraf oo loogu talagalay dhammaan asxaabteena - waxaan kugula talineynaa ...
Saaxiibbada qaaliga ah, hadda in ka badan sidii hore, xilligan baahida loo qabo, iska kaalmaynta midba midka kale wuxuu noqday himiladeenna. Si wada jir ah ayaan hore ugu soconnaa adkeysi iyo rajo wanaag marka laga soo tago kala shaki la’aan. Sida aan ugu dadaalnay inaan ilaalino h ...
Waxyaalaha cusub ee imanaya soo-haraha jagada
Waa salaaman tihiin, qof walba, waxaa jira hal war oo wanaagsan labadeenaba iyo adigaba, waxaan horumarinay laba qaab oo cusub oo qaab sax ah isku-hagaajinta casriga ah. Sawirada tixraacaaga sida, ...
Sida loo doorto socodsiinta hemiplegic
Marka loo eego tirakoobka, sannad kasta waxaa jira 1.2-1.8 milyan oo bukaannada qalalka ah, 400000-800000 oo sannadle ah iyo 86.5% heerka naafonimada. Marka loo eego tirakoobka aqoonyahannada qaar, oo ka mid ah kuwa ka badbaaday bukaanka istaroogga, ...
Waa salaaman tihiin, qof walba, waxaa jira war wanaagsan labadiinaba labadiinaba adiga iyo idinka, waxaan horumarinay laba qaab oo qaab sax ah u habeeya. Sawirada tixraacaaga sida, ...
Dabaal-wadashaqeynta warshad RUKANG ...
Si diirran ugu dabaaldego iskaashiga caafimaadka Hongzhu iyo Rukang si loo saxeexo heshiisyada ku aadan curyaamiinta curyaamiinta. Hogaamiyaasha labada dhinac, Mr. Yang iyo Mr. Lv way ka soo qaybgaleen waxayna balanqaadeen inay iskudayaan intii karaankooda ah ...